Dowladda Soomaaliya oo go’aanno ka soo saartay maraakiibta ganacsi ee dalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo go’aanno ka soo saartay maraakiibta ganacsi ee dalka
Dowladda Soomaaliya oo go’aanno ka soo saartay maraakiibta ganacsi ee dalka
Muqdisho-(SNTV)- Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya ayaa soo saartay wareegto lagu baabi’nayo dhammaan Shahaadooyinkii Maraakiibta Ganacsiga iyo kuwa Kalluumeysiga ee sita Calanka Soomaaliya.
Wareegtada wasaaradda ka soo baxday ayaa u qornayd sidatan:-
“Iyaddoo laga ambaqaadayo dardar-gelinta waajibaadka shaqo ee Wasaaradda u xilsaaran tahay, sidoo kale muhiimad gaar ah la siinayo horumarinta nabad gelyada iyo badbaadada nolosha badmaridda waxay Wasaaradda soo saartay qodobadaan soo socda:-
1-Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Soomaaliya waxay Baabi’isay/tirtirtay dhammaan Shahaadooyinkii diiwaan gelinta Maraakiibta Ganacsiga iyo Kalluumeysiga ee sita Calanka Soomaaliya.
4-Wasaaradda waxay soo saari doontaa Xeer-nidaamin cusub oo lagu diiwaan gelin doono Maraakiibta iyo Doonyaha iyaddoo la hubinayo inuu buuxiyey sharruudaha uu tilmaamay qaanuunka.
Gabagabada Wareegtada kasoo baxday Xafiiska Wasiirka Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda ayaa lagu sheegay in laga bilaaboTaariikhda wareegtadaan la saxiixo la baabi’iyey dhammaan Shahaadooyinkii diiwaan gelinta Maraakiibta Ganacsiga iyo kuwa Kalluumeysiga ee sita Calanka Soomaaliya.
Previous articleDowlad gobaleedyada oo markale xisaab celin la weydiiyay
Next articleHowlgal lagu xoraynayo degmada Ceelbuur oo ka bilawday Gobolka Galgaduud